ဒီဟာလေးကိုအရင်ဖတ်ပါ။ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ဒီမှာဒေါင်းပါ ကိုနှိပ်ပါ ပီးရင်5စကန့် စောင့်ပါ SKIP AD ကိုနှိ်ပ်လိုက်တာနဲ့ အော်တိုဒေါင်းလုပ်ကြလာပါလိမ့်မယ်။ကြော်ငြာတွေတတ်လာရင်ပိတ်ပစ်ပါ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ
မြန်မာကားတွေ။မြန်မာဓာတ်ပုံတွေမိတ်ဆွေတို့ မှာရှိရင်ဒေါ်က်တာမလေးကိုသတိရလိုက်ပါ။မြန်မာကားတွေပဲသီးသန့်တင်တဲ့ဆိုက်ပါ။အားပေးမူ့ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Wechat ID = coyotitoz23 နှင့် drmalay21@gmail.com သို့ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။FaceBook မှာလဲရှယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ပေးပို့သူများ၏ အကောင့်များကို အများမသိစေရန် အာမခံကြောင်း
11-28-2016, 02:45 AM ကျွန်တော်က ပြည်ပ ကပါ။ နိုင်ငံတော့ အတိအကျ မပြောတော့ပါဘူး။ နေတာ ၈နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အိမ်ထောင်သက် က ၃နှစ်။ အမျိုးသမီးက လည်း မြန်မာ ငယ်ချစ်ပဲ။
မြန်မာမှာတော့ မသိဘူး။ ဒီမှာ ကိုယ့်မိန်းမ ကို သူများနဲ့ ပေးအိပ်တာ။ ကိုယ်က ထိုင်ကြည့်တာ တွေရေပန်းအရမ်းစားတယ်.
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော့် မိန်းမကို အဖြူတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ပေးအိပ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားမလား လို့။ စိတ်ဝင်စားရင် ကိုယ်တွေ့ လေးတွေ ၀င်ရေး ပေးမလို့ပါ။
အတွေ့အကြုံရှိ၊ မြင်ဖူးကြားဖူး တဲ့ ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းတွေရှိလည်း ပြောပါ။
DrMalay_Liker Junior Member
11-29-2016, 12:02 PM Hi bro;
we already have very strong (and big) cuckold community here in Myanmar.
Majority in Yangon, Mandalay, Taunggyi and other cities.
Anyway, we would be glad to know your experiences and the proofs (pic, vid etc if you can share.
12-01-2016, 04:08 AM Really? It's there any sites i can browse? I can share more exp later.
Aungko29 Junior Member
01-07-2017, 09:26 PM (11-28-2016, 02:45 AM)pete1664 Wrote: ကျွန်တော်က ပြည်ပ ကပါ။ နိုင်ငံတော့ အတိအကျ မပြောတော့ပါဘူး။ နေတာ ၈နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အိမ်ထောင်သက် က ၃နှစ်။ အမျိုးသမီးက လည်း မြန်မာ ငယ်ချစ်ပဲ။
မြန်မာမှာတော့ မသိဘူး။ ဒီမှာ ကိုယ့်မိန်းမ ကို သူများနဲ့ ပေးအိပ်တာ။ ကိုယ်က ထိုင်ကြည့်တာ တွေရေပန်းအရမ်းစားတယ်.
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော့် မိန်းမကို အဖြူတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ပေးအိပ်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိ၊ မြင်ဖူးကြားဖူး တဲ့ ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းတွေရှိလည်း ပြောပါ။Hello!! Bro Pete,, if you really allow your wife with some stranger people , I would like to meet with you because that is very interesting to me and I also want such as experience so if you do not mind fucking with your wife with each other people, you can leave the direction and contact phone number. I can come every where. Thank you so much.
-- မြန်မာကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ Myanmar movies
-- မြန်မာဓါတ်ပုံများ Myanmar Photos
-- မိန်းခလေးတွေရဲ့ အိုးကိုအနောက်ကနေခိုးရိုက်ကြမယ်
Current time: 02-22-2017, 06:44 PM